ကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အကြံကောင်းတစ်ခုပေးလိုက်တဲ့ သန္တာလှိုင်
27 Aug 2018 . 12:02 PM
၀ါရင့် စူပါမော်ဒယ်တစ်ဦးအဖြစ် အနုပညာလောကမှာ အောင်မြင်မှုနေရာတစ်နေရာရရှိထားတဲ့ သန္တာလှိုင်ကတော့ မိန်းကလေးပရိသတ်တွေအားကျရလောက်အောင် အရွယ်တင်နုပျိုတဲ့ အလှတရားကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင် Gym ဖွင့်လှစ်ထားသလို အမျိုးသမီးတွေအတွက် အိမ်ထောင်ရေးနဲ့ အလှအပရေးရာတွေ မျှဝေပေးနေတာမို့ လူမှုကွန်ရက်မှာ သူမကို ချစ်ခင်လေးစားပြီး စောင့်ကြည့်အားပေးနေတဲ့ မိန်းကလေးပရိသတ်တွေလည်း ရှိနေတာပါ။
လတ်တလောမှာတော့ သားတစ်ယောက်၊ သမီးတစ်ယောက်ရဲ့ မေမေ သန္တာလှိုင် တစ်ယောက် သူမရဲ့ ကြားဖူးနားဝ စကားတစ်ခွန်းကို ပရိသတ်တွေအတွက် ပြန်လည်မျှဝေထားတာတွေ့ရပါတယ်။ “စကားတခွန်းကြားလို့ ပြန်ရှယ်ချင်ပါတယ် ……
ခလေးတွေကို ချမ်းသာကြွယ်ဝဖို့ထက် ဘဝကိုတန်ဖိုးထားပီး ပျော်ရွှင်ကျေနပ်အောင် နေဖို့ သင်ကြားပေးပါ ….
အဲ့ဒါမှ ကြီးလာရင် ပစ္စည်းရဲ့ တန်ကြေးကို သိရုံတင်မဟုတ်ပဲ အရာရာတိုင်းကို တန်ဖိုးထားတတ်တဲ့ လူသားတစ်ဦးဖြစ်လာမှာပါ” ဆိုပြီး ရေးသားကာ သူမရဲ့ သားလေးငယ်ဘ၀ပုံလေးတွေကို မျှဝေထားပါတယ်။
သန္တာလှိုင် ဟာ လတ်တလောမှာ ကလေးနှစ်ယောက်၊ သူမရဲ့ ဘ၀လက်တွဲဖော်နဲ့အတူ စိတ်ချမ်းသာဖွယ်ရာမိသားစုဘ၀ကို ဖြတ်သန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်အလှအပထိန်းသိမ်းနည်းလေးတွေကို ဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့တကွ သူမရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာ မျှဝေထားတာလည်း တွေ့ရပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း သူမအကြံပေးထားသလိုပဲ ကလေးတွေကို တန်ဖိုးထားတတ်တဲ့ လူသားတစ်ဦးဖြစ်ဖို့ ငယ်စဉ်ကထဲက သေချာလေးပြုစုပျိုးထောင်ပေးသင့်ပါတယ်နော်။
Photos Credit – Thandar Hlaing
ကလေးတှနေဲ့ပတျသကျပွီး အကွံကောငျးတဈခုပေးလိုကျတဲ့ သန်တာလှိုငျ
ဝါရငျ့ စူပါမျောဒယျတဈဦးအဖွဈ အနုပညာလောကမှာ အောငျမွငျမှုနရောတဈနရောရရှိထားတဲ့ သန်တာလှိုငျကတော့ မိနျးကလေးပရိသတျတှအေားကရြလောကျအောငျ အရှယျတငျနုပြိုတဲ့ အလှတရားကိုပိုငျဆိုငျထားပါတယျ။ ကိုယျပိုငျ Gym ဖှငျ့လှဈထားသလို အမြိုးသမီးတှအေတှကျ အိမျထောငျရေးနဲ့ အလှအပရေးရာတှေ မြှဝပေေးနတောမို့ လူမှုကှနျရကျမှာ သူမကို ခဈြခငျလေးစားပွီး စောငျ့ကွညျ့အားပေးနတေဲ့ မိနျးကလေးပရိသတျတှလေညျး ရှိနတောပါ။
လတျတလောမှာတော့ သားတဈယောကျ၊ သမီးတဈယောကျရဲ့ မမေေ သန်တာလှိုငျ တဈယောကျ သူမရဲ့ ကွားဖူးနားဝ စကားတဈခှနျးကို ပရိသတျတှအေတှကျ ပွနျလညျမြှဝထေားတာတှရေ့ပါတယျ။ “စကားတခှနျးကွားလို့ ပွနျရှယျခငျြပါတယျ ……
ခလေးတှကေို ခမျြးသာကွှယျဝဖို့ထကျ ဘဝကိုတနျဖိုးထားပီး ပြျောရှငျကနြေပျအောငျ နဖေို့ သငျကွားပေးပါ ….အဲ့ဒါမှ ကွီးလာရငျ ပစ်စညျးရဲ့ တနျကွေးကို သိရုံတငျမဟုတျပဲ အရာရာတိုငျးကို တနျဖိုးထားတတျတဲ့ လူသားတဈဦးဖွဈလာမှာပါ” ဆိုပွီး ရေးသားကာ သူမရဲ့ သားလေးငယျဘဝပုံလေးတှကေို မြှဝထေားပါတယျ။
သန်တာလှိုငျ ဟာ လတျတလောမှာ ကလေးနှဈယောကျ၊ သူမရဲ့ ဘဝလကျတှဲဖျောနဲ့အတူ စိတျခမျြးသာဖှယျရာမိသားစုဘဝကို ဖွတျသနျးနတောဖွဈပါတယျ။ ခန်ဓာကိုယျအလှအပထိနျးသိမျးနညျးလေးတှကေို ဗီဒီယိုဖိုငျနဲ့တကှ သူမရဲ့ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာမှာ မြှဝထေားတာလညျး တှရေ့ပါတယျ။ ပရိသတျကွီးလညျး သူမအကွံပေးထားသလိုပဲ ကလေးတှကေို တနျဖိုးထားတတျတဲ့ လူသားတဈဦးဖွဈဖို့ ငယျစဉျကထဲက သခြောလေးပွုစုပြိုးထောငျပေးသငျ့ပါတယျနျော။